Taona 2015 : betsaka ny traboina sy tratran’ny kere | NewsMada
Taona 2015 : betsaka ny traboina sy tratran’ny kere
Nampiavaka iny taona 2015 iny teo amin’ny fiainan’ny mponina tamin’ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ny fisian’ny tondra-drano sy ny tany nihotsaka vokatry ny ora-mikija nisesy.
Betsaka, araka izany, ny traboina. Nahatratra 134.000 ireo traboina manerana ny Nosy raha ny tatitry ny minisiteran’ny Mponina. 60.000 tamin’ireo, avy eto Antananarivo avokoa. Mbola betsaka ireo fianakaviana tsy tafarina vokatr’izany loza voajanahary izany.
Nisy ireo nisafidy ny hanorim-ponenana eny Andranofeno, toerana natokan’ny fanjakana ho an’ireo fianakaviana rava trano tanteraka. Nahatratra 110 ireo fianakaviana nanapa-kevitra ny hisitaka an’Antananarivo ka nanao lasa nipetraka any Andranofeno.
Efa nasiana sekoly, tobim-pâhasalamana, tsena sy toerana hahafahana mamboly eny an-toerana hahafahan’ny mponina mivelona. Iarahana amin’ireo minisitera maro ny fiaraha-miasa amin’ny famatsiana rano fisotro madio sy ny fananganana foibem-piofanana.
Nivaivay ny kere tany Atsimo
Tao ny traboina noho ny ranobe fa tao ihany koa ireo tratran’ny haintany tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Anisan’ny nanamarika iny taona 2015 iny ny kere. Maherin’ny 615.000 ireo olona niharan’ny haintany mivantana tany atsimo.
Tsy nisy ny hanin-kohanina, ritra ny rano sotroina ary novidiana hatramin’ny 1.000 Ar ny iray daba mavo tamin’ny taon-dasa. Nisy ny asa tanamaro nampanaovin’ny fanjakana ho fitsimbinana ireo olona tratran’ny hain-tany nivaivay ireo. Voakasik’izany ny tany Amboasary Atsimo sy Tsihombe.
Nitsoa-ponenana mihitsy ny mponina ary namidy mora ny biby tany an-toerana vokatry ny tsy fisian’ny orana ka nahafaty ny fambolena.
Mitentina 42 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka hiatrehana izany kere izany hatramin’ny taona 2020.